नेपालमा बनेको बाइक नेपालिले नै किन्न नसक्ने , कति छ नेपालमै बनेको बाईकको मुल्य ? – Dainik Samchar
August 13, 2021 389
यात्रि मोटरसाइकिल्स, अपरेसन पछाडि आधिकारिक दिमाग, पहिलो नेपाली निर्मित इलेक्ट्रिक मोटरसाइकलमाविवरण खुलासा। कार्यक्रमले दुई यात्री उत्पादनहरू प्रदर्शन गर्यो: प्रोजेक्ट जीरो (P0) र प्रोजेक्ट वन (P1)। लगभगएक बर्ष पछि, यात्री मोटरसाइकलले मूल्य विवरण सहित प्रमुख विवरणहरू प्रकट गरेको छ! त्यसो भएपछि, हामीले यात्रिको अत्यधिक महत्वाकांक्षी उत्पादन: प्रोजेक्ट शून्यको द्रुत सिंहावलोकनको लागि पर्याप्तजानकारीहरू पाएका छौं। यात्री परियोजना शून्य विशिष्टता
ब्याट्री: .0.० किलोवाट
पीक पावर: k 46 किलोवाट (H 64 एचपी)
पीक टोक़: १२० एनएम शाफ्टमा (5050० एनएम व्हीलमा)
ब्याट्री प्रकार: लिथियम–आयन
दायरा: २0० किलोमिटर
शीर्ष गती: १ K० किमी प्रति घण्टा
टायरहरू: एल्युमिनियम रिम्सको साथ मेटजेलर स्पोर्टेक M7RR
टायर आकार: ११० / -17०–१-17 (अगाडि) – डिस्क / १ 150० / -17०–१-17 (पछाडि) – डिस्क
ट्यूबलेस टायर: हो
ब्रेकिंग प्रकार: ब्रेम्बो ई–ब्रेकि।
निलम्बन: mm 43 मिमी आरसीपी समायोज्य युएसडी फोर्क्स र आरसी समायोज्य नाइट्रोजन–चार्ज मोनोशोक
सिट उचाई: mm०० मिमी
ग्राउन्ड क्लीयरेंस: १55 मिमि
तौल: १ 190 ० किलोग्राम
नेपालमा यात्रि परियोजना शून्य मूल्य: रु। 19,50,000
यात्री परियोजना शून्य अवलोकन , डिजाईन – यात्री मोटरसाइकलले केही भिन्न, मौलिक र कल्पनाशील कुरा ल्याउँदैछ! “मोशन इन मोशन” दर्शनबाट प्रेरित, प्रोजेक्टजीरोले एक क्याफे रेसर डिजाइनलाई आधुनिक तत्वहरूको साथसाथै भविष्यको अनुभूति प्रदान गर्दछ। स्टिलचेसिसको शीर्षमा कार्बन फाइबरको साथ मिश्रित, आगामी इलेक्ट्रिक टु–व्हीलर शहरी गतिशीलता पुन: उत्पन्न गर्नेतिनीहरूको लक्ष्यको तेस्रो पुनरावृत्ति हुनेछ।
प्रदर्शन – यात्रीको प्रोजेक्ट जीरोले यस प्रकारको बाइकको लागि कहिल्यै नसुनेको प्रदर्शनको आश्वासन दिन्छ। P0 कम अपरेटिंग लागतमा उच्च प्रदर्शनको साथ एक इलेक्ट्रिक पावरट्रेन द्वारा संचालित हो। इलेक्ट्रिक मोटरलेअधिकतम power 64HP (k 48 केडब्ल्यू) को शक्ति र १२०Nm को शाफ्टमा (gene gene०Nm at Wheel) उत्पन्नगर्दछ।
Prevकतारबाट ७ महीनाको पे’ ट बो के र फर्किएकी युबतीले आफुलाई यस्तो अबस्थामा अलपत्र पारेर छोडेर जाने युवकलाई भेटाईंन (भिडियो सहित)
Nextअर्की चर्चित अभिनेत्रीको ३५ बर्षकै उमेरमा निधन